भर्खरै हेर्नुहोस कोरोना अस्पतालमा भयो भिषण आगो लागि ! - समृद्ध नेपाल
भर्खरै हेर्नुहोस कोरोना अस्पतालमा भयो भिषण आगो लागि२३ जनाको जलेर ज्यान गयोभयो भागाभाग भर्खरै हेर्नुहोस कोरोना अस्पतालमा भयो भिषण आगो लागि२३ जनाको जलेर ज्यान गयोभयो भागाभाग भर्खरै हेर्नुहोस कोरोना अस्पतालमा भयो भिषण आगो लागि२३ जनाको जलेर ज्यान गयोभयो भागाभाग यो खबर पूरा थाहा पाउन तल भिडीयो हेर्नु होला ।
यो पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका धेरै युवाहरुको घर उजाडीएको उदाहरण देखिएका छन् । युवकहरु खाडी मुलुकमा पसिना बगाएर काम गरिरहेका हुन्छन् । तर सन्तान लिएर गाउँमै बसेका श्रीमती भने पारिवारिक दवाव, सामाजिक अपहेलनाका कारण गलत बाटो अपनाएका थुप्रै उदाहरण छन् । कतिपय महिला आफ्नै स्वार्थले परिवार र श्रीमान छोडेर छुट्टै बाटो लागेको पनि देखिएको छ ।
५ बर्ष कान्छा प्रेमीसँग बिहे गरेकी रश्मीको फोटोको ट्याटु श्रीमानको छातीमा, रहस्य यस्तो रहेछ !
हार्दिक बधाई : प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) जस्तो गरिमामय पदमा छनोट हुन सफल हुनु भएकाेमा !
स्त्रीको सेतोपानी बग्ने देखि पुरुषको अण्डाकोष सुनिने सम्म एउटै घरायसी औषधी !
मलेसियाका नाइट क्लबमा नेपाली युवतीको कथा, ‘अब त बानी पँरे, चार वर्ष भयो पैसा राम्रै छ’ !
आजकल यस्तै छ सिन्को नभाँच्ने बुहारी म !
भ्रमण वर्षको सद्भावना दूत बने गायक प्रकाश सपूत !